မြန်မာ့ အပြောင်းအလဲ ဟန်ချက်မညီ | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| September 5, 2012 | Hits:4,052
5 | | အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ရေးမှ ဒီမိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဆီ သွားရာလမ်းသည် မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မျှ စိတ်ကူးယဉ်သလို မဖြစ်ဘဲ ကြမ်းတမ်းခက်ခဲသော စိန်ခေါ်မှုများ၊ ခါးသီးသော အမှန်တရားများနှင့် ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်း ရမြဲဖြစ်သည်။
ခါးသီးဖွယ်အမှန်တရားမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစိုးရနှင့် စစ်တပ်ကြောင့်သာမဟုတ်၊ သာမန်နိုင်ငံသားများအကြား သည်းမခံမှု၊ ခွဲခြားနှိမ့်ချမှုများ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တွေ့ရကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးအတွက် နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူများနှင့် တိုးတက်သော အမြင်ရှိသူများဟု တွေးထင်ထားသူများပင် ဤကဲ့သို့သော သဘောထားရှိကြကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်လတွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ် မစ္စတာ ဒဲရက်မစ်ချယ်က ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ လတ်တလောတွင် မန္တလေးမြို့၌ သံဃာများ၏ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကို ထောက်ခံခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ကင်တာနာကို ကန့်ကွက်ခြင်းနှင့် ရိုဟင်ဂျာ ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမှုကို ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ မီဒီယာများက လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ခွဲခြားမှုအဖြစ် ရှုမြင်ရေးသားနေကြသည်။
ဂေါဝိန်က ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ
23 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website DR. THET LWIN September 5, 2012 - 5:03 pm	တို တို ဘဲ—-နောက် ပြန် မ လှဲ. နို င် ဘူး—–ခက် မယ်–ကြာ မယ်–ရှေ့ ဆက် မယ်–။ နှေး တဲ. အ ခါ နှေး မယ်–မြန် တဲ့ အခါ မြန် မယ်—–ဥ ပ မာ– နီး နီး စပ် စပ် -ထိုင်း–ပုံ စံ နဲ. တူ မယ်–။ စ စ် တပ် ၀င် အုပ် ချု ပ် ရင် လဲ–ခ ဏ ပေါ့ ။ ဒီ မို ကေ၇ စီ စ နစ် က တော့ အ မြဲ ရှ င် နေ မယ်–။ ဈေး ကွ က် ဆက် ရှင် နေ ရင် ရ ပြီ–။ တံ ခါး မ ပိတ် ရင် ရ ပြီ–။ ဒါ ကြောင့်– WE ARE –ON THE HIGH-WAY–လို.-တင် နေ တာ ပါ–။ ( ခိုင် လုံ တဲ့ အ ကြောင်း ရှိ တယ်)–ပြော ပြ ခွင့် မ ရှိ ပါ–။
Reply	Thaung Phe September 5, 2012 - 5:37 pm	ကျွန်ုပ်အမြင်နဲ့ ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် လွှတ်တော်သည် မရင့်ကျက်သေးဟုမမြင်ပါ ခုံရုံးမှာရှိတဲ့ ခေတ်ဟောင်းကိုတွယ်တာသူများ၊ အများပြည်သူဆန္ဒ မပါဘဲ ခုံရုံးက အာဏာရှင်ဆန်စွာ ဆုံးဖြစ်နေခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်နေပြီဖြစ်သည်။ ဥပဒေ ၏အထက်တွင် ခုံရုံးလဲမရှိသင့်ပါ။
Reply	zytw September 10, 2012 - 11:22 am	မှန်သည်ဟုယူဆပါသည်။အမြင်ချင်းတူပါသည်
Reply	Than Tun September 5, 2012 - 5:59 pm	သုံးသပ်ချက်ကကောင်းတယ်ဗျာ..တခုလေးပြောပါရစေ..နိုင်ငံတိုင်းရဲ့အမိူးသားရေးစိတ်ဓါတ်ပါဗျာ..ယာဉ်ကျေးမှုအမွှေအနှစ်..ဒါလေးတွေအခြေခံတော့ကျန်မှ ရှိအုံးမှ.ထင်ပါတယ်
Reply	aung September 5, 2012 - 8:02 pm	I am also like it. It is same with my view. Thank Irrawaddy.
Reply	Kyaw Mow Myint September 5, 2012 - 8:49 pm	Dear Ko Aung Zaw
Whenever I read your editorial, my eyes shed tears.
How nice It would be if many Burmese people have same heart and intelligence like you. You are much more than being smart. You heart is so beautiful. I can feel manifestation of Buddha Dhamma in you.
Reply	than lwin September 6, 2012 - 8:07 am	kyee boat myuth boat kyee myuth.
Reply	Than Lwin September 5, 2012 - 9:18 pm	စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်း သူရ ဦးရွှေမန်း ဦးစီးသည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်သည် အပြောင်း အလဲအတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်နိုင်သေးသည်ကို တွေ့နေရသည်။
လွှတ်တော်အနေဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို ကျောထောက်နောက်ခံ ဖြစ်စေမည့် ဥပဒေများကို အစောတလျင် ပြုစုပြဌာန်းပေးရမည့်အစား အခြေခံဥပဒေခုံရုံးဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ၊ အကျိုးမဖြစ်သည့် အသေးအဖွဲများနှင့်သာ အချိန်ကုန်နေခဲ့သည်။
Reply	ပါကြီးဖိုး September 5, 2012 - 9:53 pm	ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဦးရွှေမန်းကြားမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပြိုင်ဆိုင်မှုများ ရှိနေသလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ ဆင်းရဲသား သာမာန်ပြည်သူပြည်သားများကို ထောက်ထားကာ တိုင်းပြည်ကို ဦးဆောင်နေသူများက အမြင်ကျယ်ပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ စိတ်ထားရှိဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါ။ မိသားစုတစ်ခုရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ အိမ်ထောင်ဦးစီးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာ များစွာ တည်မှီပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်မှု တစ်ခုခုဟာလည်း ကျောင်းသားကျောင်းသူ ရာပေါင်းများစွာရဲ့ အနာဂတ်ဘဝအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးရဲ့ ဘဝတွေအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။ ပြည်သူများဟာ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော် ညံ့ဖျင်း ယုတ်မာတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အောက်မှာ နေခဲ့ရပြီးပါပြီ။ လက်ရှိ ခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့ ဆရာ့ဆရာကြီးများရဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့ အတွေးအခေါ် စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို အမွေမဆက်ခံမိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Reply	zytw September 10, 2012 - 11:17 am	ထပ်သိတာလေးတွေရှိရင်လဲတင်ပေးပါအုံး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply	jhmw September 5, 2012 - 11:46 pm	For more than half ofacentury, Burmese dictatorship regime had brainwashing Burmese people for the purpose of to support them as they are nationalist. So today there is no wonder that blind nationalism has addicting with Burmese society. Just look at how the perspective of the majority of Burmese people toward on the non-Burman ethnic people in the country, they might badly hate Burmese dictators but they surely loved their propaganda very much.
Reply	pps12345 September 6, 2012 - 7:48 am	အန်တီစု မှ လွှတ်တော်တွင် ကြီးမားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ကို ခိုင်မြဲစေ ရန်လူစု နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်တွင် မမြန်လွန်းသော ပြုပြင်ပြှေုာင်းလဲမှု့သည်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာအောင် ဆက်တိုက်တိုးတက်နိုင်ခဲ့သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးလုပ်နေသည် ဟုဆိုကာ ဆင်းရဲချင်ယောင်ဆောင်ပြီး တင်ဒါတောင် မခေါ သော ပဲ တပည့်များ ကို လက်သိပ် ထိုးပေးတတ်သော ဝန်ကြီး များကို စာရင်းစစ် က တွေ့ခဲ့ခြင်း သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို နှောင့်နေးစေသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ စနစ်ကောင်းစေချင်သော လူများ အတွက် မျှော်လင့်ချက် မဲ့စေချင်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားများ နှင့်ဆွေးနွေး နေသည်ဆိုပြီး သူတို့ခန့်ထားသော တိုင်းရင်းသားအမတ်များကိုတောင် အားမကိုးပဲ တိတ်တိတ်ပုံး လုပ်ဆောင်နေသဖြင့် တိုင်းပြည်မှာ တည်ငြိမ်လာ မည်ဆိုတာ ကိုတောင် ပြော မရအောင်ပင်ဖြစ်နေပါသည်။
သမ္မတ သည် မည်သို့လုပ်နေသည် ကို သမိုင်းက သက်သေ ပြပါလိမ့်မည်။ မြတ်မော်
ဖုန်း ၀၉-၅၁၂၈၉၀၈၊ ၁၈၆၈၇၁၈၀၃၉၀
Reply	zytw September 10, 2012 - 11:19 am	လူပိန်းတွေနားလည်အောင်အကျယ်တ၀င့််ရှင်းပြပေးရင်ကောင်းမယ်
Reply	heinhtet September 6, 2012 - 9:45 am	အမျိုးသား ရေ စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ မျိုးက ရှိနေသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ..ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာ ဆောင်းပါးရှင် ပြောသလို ပြင်းထန်တဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် တွေ ပျောက်ကုန်လို့ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်လဲ ဆိုတာ နည်းနည်းလေ့လာကြည့်ပါ..အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ် မရှိရင်.. နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးပျောက်မယ်..ယဉ်ကျေးမှုပျောက်မယ်..ဘာသာတရားပျောက်မယ်..သူများတွေ အခွင့်အရေးယူတာခံရမယ်..အထူးသဖြင့် မဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာဆို နိုင်ငံခြားသားတွေ ကြီးစိုးပြီး..နိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေ က မျက်နှာငယ်ရနိုင်ပါတယ်.ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှေးနှေးပဲ သွားသွား အဲဒီ စိတ်ဓာတ် က တော့ လို ကို လိုပါတယ်. ကျန်တဲ့ နိုင်ငံတွေ က မကျေနပ်တော့ကောဘာဖြစ်သတုန်း..သူ တို့ နိုင်ငံမှာ မဟုတ်တာပဲဗျာ..ဟုတ်တယ်မလား.ကြည့်စရာမလိုပါဘူး..ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ သည် အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ သည်းခံပြီးခဲ့ ပါပြီ..ဘာကိုဆိုလို လဲ ဆိုတာတော့ သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်..အမေရိကန်လို နိုင်ငံမျိုးတွေနဲ့ တော့ နှိုင်းနဲ့ လေ..နဂိုတကည်းက သူများမြေသွားလုပြီး နေတာကိုဗျ..အဲဒါကို united state မလုပ်လို့ ရမလား..မြန်မာ ဆိုတာ ကျုပ်တို့ ဘိုးဘွားတွေရဲ့ နိုင်ငံစစ်စစ်ဗျ..ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံဗျ..united state အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး..အသည်းနာတယ်…
Reply	zytw September 10, 2012 - 11:16 am	လေးစားတယ်ဗျာ
Reply	wai lwin September 11, 2012 - 9:05 pm	you guys are funny
Reply	Aung Kyaw Nyunt September 6, 2012 - 2:31 pm	Dear outstanding Editor
Basically, we appreciate and gree with your article.
We need to study the situations of similar, but in better position, neighbor countries like Cambodia or Laos how they have achieved to gain such level of wealth.
Cambodia had achieved significant progress under the guidelines and advisory of Mr. Thaksin, Former Thai PM. Now, what kind of people are around our President who has sincere heart to bring up Myanmar toacertain level of wealth. I believe he need to reconsider this matter seriously if he wants to gain real economical progress. An outstanding economist or politician from the ASEAN area may help boast his plan by providing golden advice.
Reply	mgoogyaw September 6, 2012 - 6:47 pm	I appreciate your article. You have learn,and wise enough, to think,greatly.You know the World is in 2012,yet,the majority of Burmese,are left behind,and still their mind is in 1960’s.How much are we,develop?How much do we earn?How did the native people of the host countries treated to Burmese?Have we forgotten about the bitterness of Junta’s ruling,from 1962 till now? Have we forgotten about the General’s Wealthiness and our people poverty? Can we totally stand on our own feet? Do we”Burmese” came from ,one of the Empire,to become proud for nothing? Did we know that “no man is an island”?
Reply	pwint September 9, 2012 - 4:47 am	i like this post…thank editor..
Reply	Soe Moe September 11, 2012 - 2:25 pm	စတာကတော့ဘယ်သူလည်းမသိပါ။ ကာလကမကြာသေးတော့ရက်စဉ်သမိုင်းနဲ့ချိန်ထိုးသုံးသပ်ရပါမည်။ လစာဘယ်လောက်ရသင့်/မသင့် ကော်မတီတွေပြည်ထောင်စုအဆင့်ရှိ/မရှိ လစာတွေလျှော့ယူလို့ရ/မရ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနဘတ်ဂျက်ဖြတ် ယခင်ဒုသမတ(၁)တကယ်ကျန်းမာရေးကောင်း/မကောင်း စာရင်းစစ်ချုပ် သတ်ထုတွင်း The Voice ဖြစ်စဉ် အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ ဥပဒေပြုရေး ကြားညှပ်သွားတဲ့ ခုံရုံး ဖြစ်စဉ် Reform သွက်သွက်လုပ်ဖို့ FDI မျော် သမတကြီးနှင့် ကြံ့ကြာနေတဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်မှုဥပဒေ စသဖြင့် သုံးသပ် ရေးသားပေးကြပါ။
Reply	Thandar Oo September 11, 2012 - 2:42 pm	ဧရာဝတီ့ Soe Moe ပြောသလိုသုံးသပ်ပေးပါ
Reply	ရာဇာ September 12, 2012 - 11:52 pm	ဟိန်းထက်ပြောတာသိပ်သဘောကျပါတယ်။ စီးပွားရေးကို အလောတကြီးလုပ်လို့မရပါဘူး၊ နိုင်ငံတကာရဲ့လက်ခံလာနိုင်မှုအတွက် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကို ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ရမှာလား၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရင်းနှီးလိုက်ရမှာလား၊ မည်သည့်နိုင်ငံသားစစ်စစ်မဆို ကိုယ့်တိုင်းပြည်နှင့် ကိုယ်လူမျိုးအပျောက်မခံနိုင်ကြပါ။ ပြည်သူသဘောထားကိုလိုက်ရောတာ သမတကြီးမှန်ပါ တယ်။ ပြည်သူနဲ့အစိုးရ တသားထဲဖြစ်နေတာဟာ ဒီမိုကရေစီပဲလို့ထင်ပါတယ်။
Reply	Aung Khin September 15, 2012 - 10:48 am	Don’t jump toaquick conclusion that Aung Zaw is very intelligent. He does not have enough knowledge about business and economics. He’s just an political critiques. He does not know how important is the growth of domestic business inanation. He needs to go toaschool of business to learn the subject. He is only obsessed with foreign investment in Myamar. You cannot ignore the development of local business. Every country has the plan to protect the interest of their local business.
As well, I think his political views are somewhat imbiguous. In his other article, he talked about the responsibility of previous governments to punish the military intelligence agents who killed ABSDF in Kachin state. It is very impossible at this time of reforming period. By commenting so, he is dragging into the past and does not go forward. I think he was creating the problem and delay for reforming process. Now, in this article, he hinted he wants to move forward.
He’s double tongued like all pundits who get paid to write the way they were instructed. Don’t believe whatever is written and printed in the news. You have to keep watching him and see who he is supporting. I think he tried get favour from Thein Sein government recently.